नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्ला ? उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) नेपालमा सार्वजनिकसेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै सार्वजनिकसेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्र्ला उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) २०७७ मङ्सिर ६, शनिबार,१०:२५:AM
सहकारीको महत्वबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायाहरुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) सहकारीको महत्वबारे प्रकाश पार्दै नेपालमा सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायाहरुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस । (विषयगत) २०७७ कात्तिक २९, शनिबार,०९:५९:AM
मानव संसाधन व्यवस्थापनको विशेषताहरु उल्लेख गर्दै यसका कार्यहरुको चर्चा गर्नुहोस मानव संसाधन व्यवस्थापन (Human Resource Management) संगठनमा जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, उपयोग, सम्भार र निवृति सम्मका क्रियाकलापहरुको व्यवस्थापन ग २०७७ असाेज २५, आइतबार ,०९:३०:AM
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्ला ? उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) नेपालमा सार्वजनिकसेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै सार्वजनिकसेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन के कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्र्ला उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) २०७७ असाेज ९, शुक्रबार,०९:५१:PM
निजामती सेवाका विशेषता केलाउदै यसमा रहेको चुनौतीहरु समेत उल्लेख गर्नूहोस । (लोकसेवा दर्पण ) निजामती सेवाका विशेषता केलाउदै यसमा रहेको चुनौतीहरु समेत उल्लेख गर्नूहोस । (लोकसेवा दर्पण ) २०७७ असाेज २, शुक्रबार,०८:५३:PM
एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) एकात्मक र संघात्मक सरकारका गुण तथा दोषहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) राज्यलाई गतिसिल तुल्याउने, २०७७ भदाै २६, शुक्रबार,०९:१०:PM
वैदेशिक सहायताको बारेमा संक्षिप्त परिचय दिदै यसको उद्देश्यहरु, यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक असरको बारेमा प्रष्ट पार्नुहोस् । (लोकसेवा दर्पण ) वैदेशिक सहायताको बारेमा संक्षिप्त परिचय दिदै यसको उद्देश्यहरु, यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक असरको बारेमा प्रष्ट पार्नुहोस् । (लोकसेवा दर्पण ) &n २०७७ साउन १७, शनिबार,०३:२९:AM
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम बारे उल्लेख गर्नुहोस । (लोकसेवा दर्पण ) (लोकसेवा दर्पण ) विषयगत नेपालको संवैधानिक विकासक्रम बारे उल्लेख गर्नुहोस । २०७७ साउन १०, शनिबार,०४:००:AM
शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण (लोकसेवा दर्पण) प्रत्येक शनिबार (लोकसेवा दर्पण) नेपालको वर्तमान संविध २०७७ साउन ३, शनिबार,०३:२१:AM